Apple inotangisa Ruzhinji Beta yeIOS 12.2 | IPhone nhau
Apple inotangisa iyo iOS 12.2 Ruzhinji Beta
iOS 12.2 yakagadzirirwa kuva yechipiri yekuvandudza yeiyo inoshanda system yekambani yeCupertino, isu hatina mubvunzo nezvazvo, kutaura zvazviri tinokurudzira kuti uende yeiyo posvo yatinotaura pamusoro penyaya dzakakodzera kwazvo izvo zvinotarisirwa kuti iwe ugadzirire.
Nekudaro, pasati paine chero chepamutemo chinogadziridzwa Apple inotanga kuburitsa akateedzana ekuedzwa shanduro. Iyo Cupertino kambani ichangoburitsa iOS 12.1 mune yayo yekutanga Ruzhinji Beta kuitira kuti chero mushandisi anakirwe neyokutanga inotarisirwa nhau, gara nesu uye uwane zvaunogona kuita nazvo.
Pakati pezvinhu zvitsva tinowana kugadziriswazve kwemifananidzo yakawanda iyo kusvika parizvino iine chirevo chakapetwa, kuvandudzwa padanho reApple Pay, uye zvimwe zvatisingazokwanise kukoshesa zvakaita sekugadziriswazve kweApple Pay Cash kana kusvika kweApple News. kuenda kuNorth America nyika yeCanada. Hatisati tine chokwadi nezve hupenyu hwebhatiri kana kuita kwese kuita, chero., asi zvese zvichauya sekufamba kwemazuva. Usatsauka zvakanyanya kana uchida kuziviswa zvakanaka.
Maitiro ekuisa iOS 12.1 Veruzhinji Beta
Iyo Ruzhinji Beta chirongwa hachidi iyo yekuvandudza account uye hapana chikonzero chekubhadhara chero chinhu. Ichi chirongwa chakavhurika kune chero munhu anoda uye chinodiwa chete kuve neakaundi account, chimwe chinhu icho munhu wese ane Apple chishandiso atove nacho. Maitiro ekunyoresa ari nyore kwazvo. Dhawunirodha chimiro chinokupa mukana weBeta, saka kubva kuchinhu cheIOS iyo iwe yaunoda kugadzirisa kune iOS 12 iwe unofanirwa kuwana Iyi link Zvakananga kuApple kurodha pasi chimiro pane imwecheteyo kifaa uye nekuchiisa, yeuka kuti unofanirwa kushandisa yako Apple ID.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Apple inotangisa iyo iOS 12.2 Ruzhinji Beta
Apple ingadai ichishanda pane yayo yekushambadzira mutambo webasa
Maitiro ekutaurirana neanogadzira app